Itiyoophiyaatti Ambaasaddarri Yunaayitid Isteets Tarkaanfiilee Dr. Abiyyii Deeggarsa Qaban Ibsan
Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa – Dr. Abiyyi Ahimed, tarkaanfiilee qajeelaa fudhataa jiranitti, guddoo humna jabaannee jirra – jechuudhaan, Itiyoophiyaatti Ambaasaddarri Yunaayitid Isteets – Maayikil Reener beeksisanii jiran.
Dhimmoota yaaddessoo tahaniif deebii kennuuf, yaalii Itiyoophiyaan gochaa jirtu deggeruuf, biyyi isaanii waan dandeessu mara akka gootu, Ambaasaddarichi mirkaneessanii jiran.
Yunayitid Isteets, haala siyaasaa Itiyoophiyaa keessa ture irratti ejjennoon qabdu kan ifatti ibsamaa ture yoo tahu – tarkaanfiilee mootummaa tokko tokko qeequun ishee fi dirreen siyaasaa akka biyyattii keessatti bal’atu ifatti gaafachuun ishee beekamaa dha. Gaaffilee sana keessaa garii deebi’anii, kaan immoo deebi’aa jiran. Fakkeenyaaf labsiin yeroo muddamaa akka kaasamu gaafatame amma kaasamee jira.
Itiyoophiyaan michuu jabduu, tasgabboofuu, misoomtuu fi milkooftuu akka taatu – fedhiin keenya yeroo hundaa. Hunda caalaa immoo uummata Itiyoophiyaatiif – jechuun gabaasaa keenya VOAf kan ibsan – Ambaadaddar Reeyiner – tarkaanfii muummichi-ministaraa Abiy fudhataa jiraniin ka jajjabaatan tahuu dubbatan.
Yunaayitid Isteets, sochiilee jijjiiramaa mootummaan Itiyoophiyaa geggeessuu fi tarkaaanfiilee inni fudhatu haga dandeesse akka deggertu, guyyaa muummichi-ministaraa Abiyyi taayitaa qabate irra deebitee mirkaneessitee jirti.
Koomishina Dhimma Baqattootaa ka Tokkummaa Mootummootaaf Koomishinara ol’aanaa ka tahan – Kilementiin Salaamii immoo, waamichi nageenyaa muummichi-ministaraa Itiyoophiyaaf dhiheessan, baqattootaaf faayida-qabeessaa akka tahuu danda’u abdii qaban ibsanii jiran.
Ka baqattoota gara biyya isaaniitti deebisuu fi lammata akka hin baqanne taasisu yaada kam iyyuu ni simanna - jedhan.
Ertiraa dabalatee – biyyoota ollaa sanaa irraa kanneen gara Itiyoophiyaatti baqatanii jiraatan – baqattoota gara Miliyoona tokkoo tahan tu biyyattii keessa jira.